Usebenzsa ezingabonakaliyo-moya ye B777 yam. Ndingenza ntoni ? (FSX / P3D)
somthamo Boeing777-300.gau, Wadalwa ngokuba FS2004, akuthethi imisebenzi FSX ngaphandle DLL ethile
Ukusombulula le ngxaki, kufuneka ekukhupheleni ukucola «DLL msvcr70.dll »Kwi engundoqo eneenkcukacha FSX ngayo (C: \_ Iifayile yeNkqubo (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight Simulator X). Ukuba umba inye Prepar3D, le isisombululo kufuneka basebenze. Noko ke, akuzange bazama thina kwi P3D.
« msvcr70.dll »Ifumaneka simahla apha: http://www.fichier-dll.fr/msvcr70.dll,2740,2740